Fiofanana mahakasika ny fahafahana manao fikarohana fandikan-dalana na OPJ | Site Web de la Direction de la Formation Continue et de la Recherche au sein de la Police Nationale
21 février 2017 Non classé No comments
Polisim-pirenena miisa 115 no nahazo fiofanana mahakasika ny fahafahana manao fikarohana fandikan-dalana na OPJ. Polisim-pirenena mitondra ny grady officier de police sy inspecteur de police, izay avy amin’ilay andiany indray mihira « Meva » vao nahavita fianarana ka navoaka tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny 10 febroary lasa teo sy ireo polisim-pirenena izay nahazo fisondrotana galona farany teo. Izany dia tafiditra ao anatin’ny politikan’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny polisim-pirenena.
Raha tsiahivina dia nanomboka tamin’ny taona 2012, rehefa nisy ny fifanaraham-piara-miasa tamin’ny minisiteran’ny fitsarana dia nisy ny famolavolana « modules de formaton » izay naharan’ny fanomezana fiofanana manokana ho an’ny polisim-pirenena mahakasika ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny asa fikarohana ny fandikan-dalana na ny « direction et contrôle des enquêtes judiciaires».
Raha ny voalaza ao anatin’ny Code de Procédure Pénal tokoa dia ny polisim-pirenena mitondra ny galonan’ny Officier sy Commissaire de police no misalotra avy hatrany ny « qualité d’OPJ » rehefa mahavita ny fiofanana fototra.
Ireto inspecteur de police ireto kosa izany dia tsy maintsy mahazo ity fiofanana ity, vao miroso amin’ny fangatahana ny « qualité d’OPJ » eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany.
Teo anivon’ny Direction de la Formation Continue et de la Recherche no nikarakara ny fiofanana izay nahitana ny fombafomba fanaovana fikarohan-dalana, nahitana ihany koa ny fanentanana izay nandraisan’ny avy ao amin’ny Direction des Inspections Générales des Services na DIGS eo anivon’ny Inspection Générale de la Police Nationale anjara, ary koa ny fampahafantarana ny fehezan-dalana mahakasika ny « torture » mba ahafahan’ny polisim-pirenena miatrika ny asany lavitry ny herisetra ary ao anatin’ny fanajana ny fitsipika sy ny fehezan-dalana ary ny zon’olombelona tanteraka.
Avy ao amin’ny polisim-pirenena ihany moa ny mpampiofana nahitana ny CPP RANDRIAMBELO Ny Aina, ny CPP RAKOTOMALALA Simon sy ny CPP RAKOTONDRASOA Jean de Matha. Fiofanana izay notanterahana ny 13 ka hatramin’ny 17 Febroary 2017 eny amin’ny DFCR.
Mbola misy andiany faharoa moa ity fiofanana ity , izay natokana ho an’ireo polisim-pirenena nisondrotra galona miasa eny anivon’ny sampandraharaha ivelan’ny polisim-pirenena.